HBO Ankehitriny Discount ho an'ny mpianatra (2020) - Ahoana ny fomba fampiharana? - Ahoana No
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra HBO izao?
HBO Now dia serivisy mivantana misy amin'ny Internet. Ny vohikala dia feno atiny avy amin'ny serivisy fahitalavitra. Safidy malaza androany hijerena seho mahafinaritra ity. Ny tanora amin'izao fotoana izao dia mitady atiny vaovao foana. 2020 no taona feno fialamboly tena tsara. Samy mitady vaovao daholo fandaharana sy sarimihetsika handefasana . Ny fijanonana ao an-trano dia mety ho mankaleo mandritra ny volana maro. Ireo mpianatra indrindra indrindra dia mitady tolotra tsara be.
Azonao atao ny mijery ireo drafitra ireo ary mahazo atiny mirary. Amin'ity torolàlana ity dia hijery ny tolotra fihenam-bidy ho an'ny mpianatra HBO Now izahay. Hiezaka hamaly ny fanontanianao rehetra momba ity serivisy ity izahay.
Manana fihenan'ny mpianatra ve izao ny HBO?
HBO Now dia serivisy mivantana mivantana. Manana tobim-pampiasa kely izy ireo raha oharina amin'ireo goavambe streaming toa an'i Netflix.Nanome fihenam-bidy ho an'ireo mpampiasa azy io sehatra io. Tsy azo ampiasaina amin'ny mpanjifa vaovao izy io izao.
Tapitra ny tolotra taloha kelin'izay. Ireo mpampiasa vaovao dia tsy afaka mandray anjara amin'ny programa fihenam-bidy ho an'ny mpianatra.Fandaharana malaza io hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay. Ireo mpampiasa izay efa ao amin'ny famandrihana dia afaka manohy mandray ny tombony. Ny vidin'ny fisoratana anarana dia kely fotsiny dolara.
Fiovana amin'ny HBO izao?
HBO dia manaraka fizotry ny famerenana indray. Manova tanteraka ny fomba ahafahantsika mivezivezy amin'ny fampiasana ny serivisin'izy ireo izy ireo. Tena lehibe ny fanovana ny HBO Now. Tsy miasa intsony ho an'ny mpampiasa vaovao ny tranokala. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny serivisy HBO amin'ny alàlan'ny HBO Max. Ny sehatra HBO Now dia miova miadana. Tsy azon'ny mpampiasa afa-tsy any Etazonia ihany izy io izao. Ny tranonkala HBO Now dia nanjary tsy nandray andraikitra firy. Ireo mpampiasa dia tsy afaka mamorona kaonty vaovao na misoratra anarana amin'ny serivisiny.
Dingana hisoratra anarana amin'ny HBO Now Free Trial:
Mety tsy hisy intsony ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra, nefa afaka misoratra anarana ihany ianao. Misy seho an-taonina maro izay mendrika alefa. Mahatalanjona ny fanananao serivisy mivantana amin'ny Internet amin'ny fandaharana amin'ny televiziona tianao. Azonao atao ny miverina amin'ny fotoana rehetra handefasana fizarana tsy azonao. Manantena izahay fa hanampy anao amin'ny famoahana atiny tena tsara ny mpitari-dalana anay. Ireto ny dingana azonao arahana amin'ny valiny tsara indrindra.
Hanombohana ny famandrihanao dia mila mitsidika ny tranonkala HBO Now ianao. Azonao atao ny manomboka amin'ny fipihana ity rohy ity - https://www.hbomax.com/ . Ny pejy fandraisana dia mampiseho fampisehoana mahatalanjona sy sarimihetsika misy.Azonao atao ny manindry ny fanombohan'ny bokotra fanandramana maimaim-poana. Azo atao mandritra ny fito andro ny fitsarana ho an'ireo mpampiasa vaovao.
Toy ny mpamatsy serivisy mivantana, tsy maintsy mamorona kaonty ianao raha hampiasa. Ireo mpampiasa dia tsy maintsy mampiditra ny anarany, ny adiresy mailaka ary mamorona teny miafina. Tokony ho azonao antoka fa azo antoka sy ahazoana aina ny teny miafina manampy anao. Ekeo ny fepetra sy fepetra apetraky ny HBO Max hamoronana kaontinao.
Ny dingana farany amin'ny dingana dia ny manampy ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola. Ireo mpampiasa dia afaka manampy ny carte de crédit na PayPal.Hanampy anao hanomboka ny fitsarana maimaim-poana izany. Afaka misitraka ny tombotsoan'ny serivisy ireo mpampiasa raha vao misy io fampahalalana io. Hanomboka avy hatrany ny fe-potoana fito andro.
Amazing! Ankehitriny ianao dia afaka mankafy traikefa mivantana amin'ny alàlan'ny HBO Max.
Vidin'ny fihenan'ny mpianatra HBO:
Ny sandan'ny fihenan'ny mpianatra HBO dia $ 9.99 isam-bolana (miampy haba). Izy io dia serivisy premium miaraka amin'ny vidin'ny famandrihana. Mahazo tombony ny mpampiasa amin'ny karapanondron'ny mpianatra. Androany ianao tsy afaka mampiasa ny fihenam-bidy amin'ny kaonty vaovao. Azo takarina ny vidiny raha jerena ny fisoratana anarana lafo. Ny sarimihetsika mahazatra dia lafo kokoa. Ireo mpampiasa taloha dia tsy manana ahiahy amin'ny HBO Now. Ny drafitr'izy ireo dia hijanona ho manan-kery mandra-pahatongan'ny volan'ny mpianatra. HBO dia manamarina tsy tapaka ny ID-nao mba hahazoana antoka fa ny mpianatra ihany no mahazo an'io tolotra io.
Iza no afaka mahazo HBO Max maimaim-poana?
HBO dia nanavao ny fe-potoana fampiasan'izy ireo tamin'ity taona ity. Ny marika sy serivisy vaovao dia nanjary malaza eo amin'ny besinimaro.
Ny sehatra HBO Max dia mikendry ny hampihenana ny fihenam-bidy. Ireo mpamandrika HBO Now dia afaka manomboka mampiasa ny serivisy HBO Max. Ny fampahalalam-baovao dia manatanteraka ity fanavaozana ity manomboka ny 27 Mey. Ny olona mpandray anjara amin'ny HBO miaraka amin'ny DTH dia afaka mahazo ny serivisiny Max maimaim-poana ihany koa.
Azonao atao ny manamarina ny lisitry ny mpanome amin'ny tranokala ofisialy. Ny serivisy fahitalavitra lehibe sy ny serivisy DTH dia efa manana HBO eo amin'ny sehatra misy azy ireo. Ireo mpampiasa dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mari-pahaizana amin'ny sehatra HBO Max.
Ity ny rohy - https://help.hbomax.com/Answer/Detail/2360 . Hita eto ny lisitr'ireo mpanome tolotra feno.
Endri-javatra ny HBO:
Ny serivisy HBO Max dia manolotra fiasa an-taonina. Ny tolotra mivantana dia manjary ankafizin'ny besinimaro. Zava-dehibe ny miavaka hahazoana mpamandrika bebe kokoa. Manampy ny vidinao koa io. Andao jerena ny lampihazo.
1. Jereo ny zava-drehetra ao amin'ny HBO
HBO dia TV Studio premium. Ny exclusives misy amin'ny sehatra misy azy ireo dia mahavariana. Amporisihinay ny mpamaky anay rehetra. Manana seho mahafinaritra toa ny Game of Thrones, Watchmen, ary famoahana vao haingana toa an'i Euphoria izy ireo. Ireo miavaka amin'ny sehatra dia antony lehibe hampiasana vola amin'ny mpanelanelana.
Nifindra nankany amin'ny fialamboly an-tserasera izahay tamin'ny taona 2020. Ny toerana dia fividianana mendrika na amin'ny fialam-boly na amin'ny fialamboly amin'ny fahitalavitra.
Ny sehatra streaming dia afaka manantena valiny tsara rehefa misy ny tena izy tena izy.Manome anao tosika fanampiny amin'ny fampiasana ny serivisy.Androany ny safidy streaming rehetra dia manolotra fanangonana fampisehoana am-boalohany. Manentana ny mpampiasa hividy ny tena izy.
HBO Max dia misy atiny vaovao mihodina saika isam-bolana.Mampanantena seho vaovao mahatalanjona mandritra ny taona 2020 izy ireo.
3. Mpijery marobe
HBO Max dia sehatra mahafinaritra izay ahafahanao mivezivezy amin'ny fitaovana marobe. Azonao atao koa ny misintona ny seho sy ny sarimihetsika hita ao amin'ny forum. Manampy anao hitahiry angona izany raha mijery eo am-pandehanana. Afaka milalao azy io amin'ny findainy finday, fahitalavitra, Takelaka sy solosaina findainy amin'ny fotoana iray ny mpampiasa. Miankina amin'ny sehatra ampiasainao izany.
Ireto ny sasany amin'ireo fiasa mahafinaritra atolotry ny HBO Max ankehitriny. Manoro hevitra anao izahay handalo azy ireo ary handroso.
Vidiny amin'ny HBO:
Tsy misy famandrihana vaovao ho an'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra HBO Now. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny sehatra HBO Max. Ny sandam-bolan'izy ireo dia mitombina ary mitovy amin'ny forum taloha.Ny serivisy dia misy amin'ny $ 14.99 isam-bolana. Vola sahaza izany ary mampihena ny vola laninao amin'ny fijerena fahitalavitra.
Mampalahelo fa tsy misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ho an'ny HBO Max.Afaka mijery fizarana maimaimpoana amin'ny sehatra ireo mpampiasa. Kitiho eto - https://www.hbomax.com/watch-free .
Tsy misy intsony ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra HBO Now. Ny sehatra iray manontolo dia mahita fanavaozana goavana. Manantena izahay fa afaka mamaly ny fisalasalanao rehetra ny mpitari-dalana anay. Ankafizo fotoana mahafinaritra handefasana atiny tena tsara.
Fanolorana mpianatra hafa mety ho tianao:
You Season 4: Zavatra tokony ho fantatrao!
Fitiavana Fiainana vanim-potoana 3: Daty Famotsorana: Mpilalao, Tetikasa, Hevitra, Trailer, & Spoiler ho an'ny 2022!
hiovaova avy amin'ny youtube ho mp3
misintona sarimihetsika azo antoka sy maimaim-poana
tranokala inona no azoko télécharger sarimihetsika maimaim-poana
ahoana no ahazoana disney miampy maimaimpoana
lalao roblox maimaim-poana tsy misy fampidinana
hulu mivantana vs tv youtube